यो हप्ता सुनको मूल्य घट्यो, आज कारोबार कतिमा ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यो हप्ता सुनको मूल्य घट्यो, आज कारोबार कतिमा ?
शुक्रबार सुनको मूल्य ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा ८६ हजार तीन सय रुपैयाँमा झरेको हो । समग्रमा भने यो हप्ता सुनको मूल्य ९ सय रुपैयाँले घटेको छ । हप्ताको पहिलो दिन तोलामा ८७ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य शुक्रबार ८६ हजार तीन सय रुपैयाँमा झरेको हो ।